Obani abakwa-Homegrowers, ama-Microgrowers? | Isicelo sePennsylvania Grower
Izicelo ZasePennsylvania Grower ngoba i-cannabis ngeke itholakale isikhashana, kepha ungafunda konke ngalokho okungenzeka kukho SB 350. Sifaka imigomo nemibandela yesimemezelo esingathi ngelinye ilanga sibe ilayisense lasePennsylvania Growers.
Ngengxoxo ezungeze i-Cannabis ne Imithetho ye-canannabis Ekugcineni eyavula ukwamukela ukubukwa okungqubuzanayo, izindaba zezingxoxo ezimbili zasePennsylvania ezethula umthethosivivinywa wokuqinisekisa ukusetshenziswa kwensangu kwezokungcebeleka azange zimangele. ISenate Bill 350 ehlose ukwenza ngokomthetho ukusetshenziswa kwensangu yokuzijabulisa, yethulwe yiSenator State State uSharif Street noDaylin Leach eHarrisburg ngoLwesibili.
U-Leach ukholelwa ukuthi uma evunywa, uMthethosivivinywa uzokwazi ekugcineni ukugcina imakethe emnyama ye-cannabis futhi inikeze umthetho wokusetshenziswa kwensangu embusweni. I-Senate Bill 350 iqukethe imibono ethile eyisisekelo nemithetho yabantu abafuna ukuvunyelwa ukukhulisa i-Cannabis yokusetshenziswa komuntu siqu noma kwezohwebo. Le ndatshana ixoxa ngokucophelela ngezinto ezihlobene ne Pennsylvania Umhlwanyeli isicelo kanye nemitheshwana uMthethosivivinywa ofuna ukuyisebenzisa Abatshali.
Obani Abasebenza ekhaya, ama-Microgrowers, kanye nabatshali?
Ukuze ukwazi ukuqonda i-Senate Bill 350, kubalulekile ukuqonda umbono ngemuva kwezigaba ezintathu eziphakanyisiwe zabakhiqizi bezitshalo ze-hemp: Abasekhaya, Ama-Microgrowers, futhi Abatshali.
Ngokuvumelana ne I-Senate Bill 350, ithemu Abasekhaya kubhekiswa kubantu abavunyelwe ngumnyango ukuthi bakhule ama-cannabis ukuze bawasebenzise. Isikhathi Ama-Microgrowers isetshenziselwa ukubhekisa kubantu abavunyelwe umnyango ukukhulisa insangu ekhaya ukuyithengisa kwi-dispensary noma processor. Isigaba sesithathu, esibizwa ngokuthi Abatshali, kufaka phakathi abantu, izinhlangano, izinkampani, izinhlangano nobambiswano, osayizi wesitjalo sawo sonke isikhathi se-cannabis sidlula amamitha skwele ayi-150,000 wesikhala sangaphandle noma amamitha angama-skwele angama-60,000 wesikhala sangaphakathi.
Umthethosivivinywa ohlongozwayo ubeka imithetho ebukhali kakhulu kwi Abatshali, futhi le ndatshana izogxila esigabeni esithile se Abatshali.
Ukuqonda imiqondo yabaKhulisi, ama-Microgrowers, nabasebenza ekhaya
Umthethosivivinywa ohlongozwayo wenza umehluko ocacile phakathi kwemibono ye abalimi, imibhobho, Futhi abaninikhaya.
Ngokusho komthethosivivinywa ohlongozwayo, abantu abosayizi ngamunye wezitshalo zabo abedlula amamitha skwele ayi-1,50,000 wezikhala zangaphandle noma izinyawo ezingama-60,000 ezikwele indawo yangaphakathi bazowa ngaphansi kwesigaba se-Gabahleli. Abantu abavunyelwe ngumnyango ukuthi bakhule insangu ngezinhloso zokuyisebenzisa noma ithengiswe e-dispensary izowela ngaphansi kwesigaba 'Ama-Microgrowers. ' Ekugcineni, lo mthetho uyachaza 'abaninikhaya' njenganoma yimuphi umuntu ovunyelwe umnyango ukukhulisa insangu ukuze uzisebenzisele yena.
Kubalulekile ukuqonda umehluko phakathi kwale mikhakha emithathu njengoba imikhawulo engokomthetho nemikhawulo ebekwe kuzo zonke izigaba ihluka kakhulu. Le ndatshana igxile ezintweni ezenziwa ezungeze Inqubo yesicelo sePennsylvania Homegrower, njengoba kuhlongozwe umthethosivivinywa omusha, kanye nemikhawulo umthethosivivinywa ohlongozwayo obeka abaninikhaya.